१०० बर्ष बाँच्ने मन छ ? यस्तो गर्नुहोस् - Nayapul Online
कुनै नेपाली ७१ बर्ष पार गर्छ भने त्यसलाई ‘बोनस’ मान्नुपर्ने हुन्छ ।
यत्तिका उमेरसम्म बाँच्नु खुशीको कुरा त हो, तर बाँच्नु मात्रै आफैंमा कुनै उपलब्धी भने होइन । कसरी बाँच्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । रोगी थलिएर, ओछ्यानमा पसारिएर जीवन व्यातित गर्नुको खास अर्थ छैन । यो त यातना वा पीडा भोग्नुजस्तै हो ।
हामी नेपालीहरुको नियती के छ भने २२ बर्ष नपुग्दै घर-गृहस्थीमा फस्छौैं । ४० बर्ष नपुग्दै अनेकन रोगले च्याप्न थाल्छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थाइराइड, दम आदिले ग्रस्त हुन्छौं । त्यसपछिको जीवन औषधी सेवन गर्दै र अस्पताल धाउदैमा बित्छ । जीवन आफैमा कष्टकर बन्छ । आफ्नो उर्बर उमेर त्यसै नाशिएर जान्छ । हामी थाक्दै र गल्दै जान्छौं र घर-परिवारका लागि बोझ बन्छौं । आखिर किन यस्तो ?
जवाफ हामीले आफ्नो जीवनशैलीभित्र खोज्नुपर्छ । खानपान, जीवनशैली र सोच-चिन्तनको कारण हामी जीवनको उन्नत सुख-भोगबाट बञ्चित हुँदैछौं । कसरी जीवन लामो बनाउने ? कसरी निरोगी हुने ? यावत् जिज्ञासा मेट्नका लागि बीबीसी हिन्दी अनलाइनले प्रकाशित गरेको एक आलेख उपयोगी हुनसक्छ ।
लामो आयु कसरी पाउने ?
‘ब्लु जोन्स’ का लेखक डान ब्यूटरनरले विश्वका ती पाँच स्थानको अध्ययन गरे, जहाँका मानिसहरु लामो आयुका लागि प्रख्यात छन् । यी स्थान हुन्, जापानको ओकिनावा, कोस्टारिकाको नियोका, ग्रीसका इकारिया, क्यालिफोर्नियाका लोमालिंडा र इटलीका सर्डिनिया ।
यी सबैका बासिन्दा लामो आयु बाँच्छन् । उनीहरुको केही कुरामा समानता देखियो । ति समानता थिए, सामाजिक सुरक्षा तन्त्र, नियमित व्यायाम र शाकाहारी खानपान ।
रेशम चौधरी सपथ, विभिन्न दलको विरोध